Iran: Martioran’iza izy ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2011 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Shqip, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
I Sane Jaleh, 26 taonaM, dia mianatra tao amin'ny haisoratra an-tsehatra tao amin'ny Anjerimanontolon'ny Zavakanto any Tehran. Silamo Sunni, avy any Paveh i Sane any amin'ny faritanin'i Kurdistan.
Raha manamafy ny tranonkala Iraniana manohana ny governemanta fa mpikambana miaramila Basij izy, novonoin'ny mpanohitra, ny vohikalan'ny mpanohitra kosa milaza fa mpanohitra izy. Mifampiampanga ho mangalatra ny maha Saleh an'i Saleh ny andaniny sy ny ankilany.
Naneho ny sariny sy ny his karatra maha mpikambana Basij azy ny tranonkala mpomba ny fitondrana, ny tranonkalan'ny mpanohitra kosa naneho ny sariny miaraka amin'ny nahazo mariboninahitra farany vao haingana, Ayathollah Montazeri, endriky ny mpitarika ny fanoherana ny governemanta.
Nilaza tamin'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iran i Reza Sajadi, sekreteran'ny Fikambanana Islamista ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Zava-kanto any Tehran, ary namana akaikin'i Sane Jaleh, fa na eo aza ny fandrahonana natao azy, dia mandà mafy ny maha-mpikambana ny namany ao amin'ny fikambanana Basij izy.
Eo amin'ny YouTube, horonantsary fohy mitondra ny lohateny hoe ‘Bricks in the Wall – Biriky anaty Rindrina’ izay maneho ny fandraisan'anjaran'i Saneh eo amin'ny horonantsary miaraka amin'ny hafatra fanoherana, nalaina avy amin'ny ‘The Wall’ nosoratan'i Pink Floyd.
Greenofred, Iraniana iray mpitoraka bilaogy dia milaza [fa] fa ankehitriny ny mpamono an'i Saleh [manondro ny hery manohana ny governemanta] no mikarakara ny fandevenana ny razany raha toa kosa ny mpitandro filaminana tsy namela ireo naman'i Saleh hiala ny anjerimanontolo… Ao amin'ny tafatafa nataony tamin'ny VOA Persiana, nilaza ny rahalahiny fa tsy mpikambana ao amin'ny miaramila i Saleh ary ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniny izay mpanohana ny governemanta no nampiasa tsy nahazo alalana ny sariny mba hanaovana karatra diso haseho eo amin'ny tranonkalan'ny mpanohana ny fitondrana… Miaina ny tsindry hazo lena ny fianakaviana.
Milaza ihany koa i Faryad Sabz fa nalevina tsy notronin'ny namany mpiara-mianatra aminy i [fa] Saleh.
Mpanohana maro ny governemanta toa an'i Peynevesht no niezaka[fa] namaly ny ahiahy amin'ny maha tena izy na tsia ity karatra Basij ity.
Mampatsiahy ahy ny fiteny iray izay reko tamin'ny nanombohan'ny horonantsary Western mikasika ny fihazana bibidia ny tantara ratsin'i Saleh, manao hoe: “Rehefa tsy misy vidiny ny aina, ny fahafatesana kosa misy be.”